सङ्घीयतामा औद्योगिक अवसर र चुनौती | गृहपृष्ठ
Home वार्षिकोत्सव बिशेष सङ्घीयतामा औद्योगिक अवसर र चुनौती
on: १८ भाद्र २०७५, सोमबार ०९:२४ वार्षिकोत्सव बिशेष
नेपालमा औद्योगिक विकासको यात्राले आधा शताब्दी पार गरिसकेको छ । सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न नीति र कानून नल्याएको पनि होइन । हरेक वर्षजस्तो सरकारी बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले औद्योगिक विकास, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सृजनाजस्ता शव्द कहिल्यै छुटाउँदैनन् । स्पेशल इकोनोमिक जोन (सेज) निर्माण गर्ने भनी सरकारले नीति लिएकै १ दशकभन्दा बढी भयो तर पनि एउटा सेज सञ्चालनमा आउन नसक्नु लाजमर्दाे कुरा हो । भएका पुराना औद्योगिक क्षेत्र अहिले काम नलाग्ने भएका छन् । देशमा थुप्रैपटक राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर, औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सहयोगी हुने तरीकाले आर्थिक परिवर्तन हुन सकेन । बरु राजनीतीकरणको विभाजनमा औद्योगिक क्षेत्र पर्न गयो ।
सङ्घीयतामा औद्योगिक क्षेत्र
नेपाल औद्योगिकीकरणको सम्भावना प्रबल भएको मुलुक हो । संसारकै ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई ठूला देशका बीचमा नेपाल छ । उच्च जीवनस्तर अपनाउने ठूलो जनसङ्ख्या रहेको छिमेकी पाउनु नेपालको आर्थिक विकासका लागि राम्रो सङ्केत हो । नेपालले छिमेकी मुलुकलाई उपयुक्त बजारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ । एक सर्वेक्षणमा देखाइएको तथ्याङ्कअनुसार भारतमा मात्रै करीब ४० करोड मानिस अमेरिकीस्तरमा जीवन बिताउँछन् । त्यसैले पनि हाम्रा गुणस्तरीय उत्पादनलाई बजारको समस्या छैन । तर, दुई छिमेकी नेपालका उपयुक्त बजार मात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनका लागि चुनौती पनि हुन् । नेपालमा उत्पादन भएका अधिकांश उत्पादन विदेशी उत्पादनभन्दा महँगो भएकाले पनि दुई छिमेकी देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । यसका कारण उद्योगी व्यापारीहरूले पनि आफ्नै उद्योगमा उत्पादन नगरी विदेशबाट आयात गर्ने प्रचलन छ । साथै सरकारको पनि भन्सारमुखी अर्थतन्त्र र रेमिट्यान्स (विप्रेषण)मा मात्रै निर्भर रहने नीतिका कारण औद्योगिक क्षेत्र साँघुरिँदै गएको छ ।
प्राकृतिक सम्पदा, विश्व श्रमबजारमा इमानदार, मेहनती श्रमशक्तिका रूपमा परिचित जनशक्ति नेपालको औद्योगिक विकासका मुख्य हतियार हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालले यस क्षेत्रमा अपेक्षाकृत विकास गर्न भने सकेको छैन । कारण, राजनीतिक दलहरूमा दूरदर्शिताको अभाव तथा बनेका योजना कार्यान्वयनमा कमजोरी पनि यसका मूलकारण हुन् । विप्रेषणका कारण कतिपय परिवारको आर्थिक अवस्थामा निकै ठूलो सुधार आएको छ । तर, यसले देशको आर्थिक विकासलाई दीर्घकालीन रूपमा टेवा दिँदैन । देशमा वर्षेनि भित्रने झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँ (अनौपचारिक रूपमा भित्रनेको त लेखाजोखा छैन)को सही रूपमा लगानी गर्न सके औद्योगिक पूँजी जुटाउन कठिन छैन । तर, सरकारको पहल यसतर्फ प्रभावकारी भएको पाइँदैन । त्यसैले नेपालमा दीर्घकालीन र स्थायी आर्थिक विकासको खाँचो छ ।
प्रदेशमा उद्योग क्षेत्रको योगदान
नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान ३ नम्बर प्रदेशको ३२ प्रतिशत छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान जनसङ्ख्या जत्तिकै १७ दशमलव ४६ प्रतिशत छ । जिल्लागत रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान पु¥याउने जिल्ला काठमाडौं (१५ दशमलव ७६ प्रतिशत) पनि यसै प्रदेशमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१५ मा गरेको एक अध्ययनमा उल्लिखित कृषि तथा पशुका जिल्लास्तरीय सूचकहरूको विश्लेषणका आधारमा कृषि तथा पशुक्षेत्रको कुल उत्पादनमा चितवनसहित समग्र तराईका २० जिल्लाको योगदान ४० प्रतिशत छ । सबैभन्दा धेरै चितवनको ३ दशमलव ५ प्रतिशत छ । यसैगरी पशुमा यस प्रदेशको अर्को जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकको योगदान ३ दशमलव ५१ प्रतिशत छ । कृषि तथा पशुक्षेत्रको उत्पादनमा पनि उल्लेखनीय भूमिका ३ नम्बर प्रदेशकै छ । कृषिको योगदान २६ प्रतिशत छ भने पशुको २० प्रतिशत । उद्योग विभागमा दर्ता उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै ६८ प्रतिशत उद्योग ३ नम्बर प्रदेशमा छन् । ४५ प्रतिशत त काठमाडौं जिल्लामा मात्रै छन् ।
उद्योग क्षेत्रमा लगानीको क्रम
पछिल्लो समय मुलुकको आर्थिक विकासको मेरूदण्डका रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । सरकारले तय गरेको ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ नारालाई पूरा गर्न पछिल्लो समय उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढेको हो । संविधान निर्माण भएपछि नेपालमा लगानीको वातावरण सृजना भएको आभास हुन थालेको छ । उद्योग विभागका अनुसार आव २०७३/७४ को तुलनामा आव २०७४/७५ मा उद्योग क्षेत्रमा दोब्बर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । आव २०७३/७४ मा ठूला, मझौला र विदेशी लगानीका साना उद्योगमा रू. १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ४० लाख लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएकोमा आव २०७४/७५ मा ४ सय ९६ उद्योगका लागि रू. ३ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड ८० लाख लगानी प्रतिबद्धता भएको छ । मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माण बन्दै गएकाले लगानी गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । यसले गर्दा विदेशबाट पनि नेपालमा लगानी गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा प्रदेश ३ मा हुने लगानीको वृद्धिमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ ।
लगानी भएका क्षेत्रमध्ये ऊर्जामूलक क्षेत्रमा बढी लगानी रहेको छ । विभागका अनुसार ३७ जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका लागि झण्डै रू. २ खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोड ५० लाख लगानी भित्रिएको छ । १ सय ३० उत्पादनमूलक उद्योगमा रू. ७७ अर्ब २६ करोड ४० लाख लगानी भित्रिएको छ भने १ सय ५९ पर्यटन उद्योगमा रू. २३ अर्ब ८५ करोड ५० लाखको लगानी प्रतिबद्धता गरिएको छ । १ सय १४ सेवामूलक उद्योगमा रू. ५ अर्ब १२ करोड ९० लाख, चार निर्माण उद्योगमा रू. ४ अर्ब ७३ करोड १० लाख, २२ कृषि उद्योगमा रू. २ अर्ब ५१ करोड ७७ लाख, चार खनिज उद्योगमा रू. २ अर्ब ४२ करोड २२ लाख र २४ सूचना, प्रसारण तथा सञ्चारप्रविधिमा रू. ७५ करोड ३० लाख लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । विद्युत् उत्पादनका लागि नेपाल उपयुक्त देश भएकाले ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको हो ।
देशमा राजनीतिक स्थायित्व र शान्तिसुरक्षाको वातावरण बनेसँगै मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा पनि लगानी बढ्दै गएको छ । विशेषगरी होटल र रेष्टुराँ क्षेत्रमा भारत र चीनका व्यवसायीको लगानी बढी रहेको छ । विभागले रू. १० करोडभन्दा कम लगानीका उद्योगलाई साना उद्योग, रू. १० देखि २५ करोडसम्म लगानी भएका उद्योगलाई मझौला र रू. २५ करोडभन्दा बढी लगानीका उद्योगलाई ठूला उद्योगका रूपमा दर्ता गर्दै आएको छ ।
विभागमा दर्ता भएका उद्योगमध्ये ७८ ठूला, ७६ मझौला तथा ३ सय ४२ विदेशी लगानीका साना उद्योग छन् । ठूला उद्योगका लागि रू. ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड १७ लाख, मझौला उद्योगका लागि रू. १४ अर्ब ९२ करोड २८ लाख र विदेशी लगानीका साना उद्योगका लागि रू. ७ अर्ब १४ करोड ४२ लाखको प्रतिबद्धता आएको छ । चालू आवमा उद्योग क्षेत्रमा आएको लगानी प्रतिबद्धता पूरा भए २७ हजार ३ सय ३९ नेपालीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउनेछन् । आव २०७३/७४ मा ५ सय १० उद्योग खोल्न लगानी भित्रिएको थियो । ९७ ठूला, ८२ मझौला र ३ सय ३१ साना उद्योग खोल्नका लागि विभागमा दर्ता भएका थिए ।
निर्वाचन भएर स्थायी सरकार बनेकाले लगानी सुरक्षित महसूस गरेर उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । ऐन, नीति, नियम परिमार्जन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन, खनिज नीति, विदेशी लगानीसम्बन्धी विधेयक, लगानी सम्मेलन, अनलाइनमार्फत उद्योग दर्ता, उद्योग विभागभित्र विद्युतीय हस्ताक्षरका साथै संस्थागत सुधारका कारण उद्योग क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ ।